के अहिले लोकतन्त्र खतरामा छ ! प्रधानमन्त्री नै किन गर्दैछन् खतराको संकेत ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
के अहिले लोकतन्त्र खतरामा छ ! प्रधानमन्त्री नै किन गर्दैछन् खतराको संकेत ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रमाथि आइलागे जाइलाग्ने बताएका छन्। २७ दिनपछि बुधबार दुईवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि खतरा आइलागे जाइलाग्ने बताएका हुन्।
उनले कसैको पनि नाम नलिई र डमरुको उदाहरण दिएर जाइलाग्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले प्रतिबन्धित विप्लव समूहको नाम नलिई नेपाली समाजमा हिंसाका लागि कुनै स्थान नरहेकाले बताए।
‘केही हिंसात्मक प्रयासहरू क्षणिक वितण्डा मात्रै हुन्, हिंसा र लुटपाट मच्चाउनेलाई सरकारले छुट दिँदैन,’ उनले भने।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्।
‘सबै सूचनाको पहुँचमा उहाँ हुनुहन्छ कुनै सूचना पाएर पनि यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ। वा संविधान निर्माणका सहयात्रीहरूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा र आफ्ना पक्षमा राख्न पनि यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले पनि तत्कालै व्यवस्थामाथि खतरा नभएको टिप्पणी गरे। संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्यव्यवस्थालाई केही असहज मान्ने मानिसले चलखेल गर्न खोजेका होलान् भन्दै उनले व्यवस्थामाथि नै चुनौती आएको भन्न नमिल्ने बताए।